बुल्गारिया बनाम स्वीडेन - World Cup qualifications Soccer predictions | शर्त सुझावहरू
शौचालय 2018 जो. Europe prediction
मिलान मिति: 31 अगस्ट 2017 | पोस्ट: 30 अगस्ट 01:25 2017 GMT +2| सुझाव हेरिएको 2952 पटक.
बुल्गारिया बनाम स्वीडेन – विश्व कप योग्यता
बुल्गारिया बनाम स्वीडेन – विश्व कप योग्यता र यो दुई ठूलो फुटबल teames बीच एक मिलान छ.
म बुल्गारिया पनि एक बिन्दु लागि यो खेलमा लगभग कुनै मौका कि बयान सुरु हुनेछ. हाँ, शायद प्रयोगकर्ताहरूको केही मानिसहरू धेरै नै भन्नुभयो कि हामी आधा वर्ष पहिले हल्याण्ड भेट्दा भन्नेछन्, बुल्गेरियन टोली गुमाउनु हुनेछ कि, तर हामी यसलाई जित्यो 2:0. अब स्थिति पूर्ण रूपमा फरक र unoptimistic देखिन्छ.
बुल्गेरियन टोली केही महत्त्वपूर्ण खेलाडी बिना छ- आफ्नो कप्तान Dyakov(एमएफ) र शायद Andrey Galabinov को बुल्गेरियन पक्ष-यो अझै पनि निश्चित छैन कप्तान हुनेछ. पनि Nikolay Mihaylov(GK) जो उहाँले हाम्रो राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो विकल्प छैन ठूलो हानि कारण यो खेलमा सम्झना र उनले बुल्गेरियन भीड द्वारा प्रेम छ नगर्ने खेलाडी को एक हो. हाम्रो कोच Bozhidar Mitrev बीच चयन गर्न हुनेछ(Levski सोफिया), Plamen Iliev(Astra) OT Georgi Kitanov(CSKA-सोफिया). यो Mitrev खेल सुरु हुनेछ लगभग मेरो लागि निश्चित छ. Crotone winger अलेक्जेन्डर Tonev अन्य absentee छ, तर सबैभन्दा ठूलो मिस स्पा Delev छ- जो हाम्रो टोली दिनुभयो जो तीन गोल मानिस6बेलारुस विरुद्ध घर WINS अङ्क(1:0) र हल्याण्ड(2:0). Galabinov Ivelin Popov द्वारा शायद समर्थित आक्रमण नेतृत्व गर्न अपेक्षित छ, Manolev र Georgi Milanov, तर सुरूवात लाइन-अप अझै पनि अप्रत्याशित छ र Petar Hubchev खेल सुरु गर्नु अघि यो चयन गर्न मान्छे हो.
स्वीडेन सोफिया मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो लाइन-अप छ र आफ्नो मुख्य गठन सुरु गर्न अपेक्षित छ 4-4-2 Berg र Toivonen फर्वाडहरु रूपमा साथ. म साँच्चै ठूलो युरोपेली क्लब को भाग हो आफ्नो खेलाडीहरू को कति उल्लेख छैन, त्यसैले बुल्गेरियन खेलाडीहरू र स्वीडिश खेलाडीहरू को वर्ग भिन्नता साँच्चै भारी छ. पनि स्वीडिश टोली आइपुगेको5खेल अघि दिनहरुमा सोफिया मा अवस्थाको प्रयोग गर्न. टोलीमा पनि तालिम र आगामी खेलका लागि तयारी गर्न CSKA-सोफिया गरेको स्टेडियम बुक. तिनीहरूले यो खेलमा गम्भीरतासाथ लिन र हाम्रो टोली रूपमा तीन अंक लड्न हुनेछ, तर स्वीडिश विरोधीहरूले को कक्षा यहाँ विजयी आशा छ.
समूहमा स्थिति बुल्गारिया छ कि छ4नेताहरू फ्रान्स र स्वीडेन पछि अंक. हामी संग छन्9अंक, जबकि स्वीडेन हुनुहुन्छ 13 अंक. हामी एक ठूलो प्रतियोगिता मा सहभागिता को लागि खेल मा हामी तीन आवश्यक अंक जीत हुँदा रहन भन्ने तथ्यलाई लोकप्रिय छन्, हामी सधैं असफल. तिनीहरूले दबाव महसुस र यो खेल यस प्रकारको हुनेछ जब हाम्रो खेलाडीहरू आफ्नो सर्वश्रेष्ठ देखाउन कहिल्यै. पनि स्वीडेन हाम्रो हो “कालो बिरालो”- हाम्रो फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा अप्रिय टोली एक.2WINS,2ड्र र9मा घाटा 13 मिलान, पछिल्लो गुमेको4ट्र्यासिं परिणाम यो दशकमा स्वीडेन विरुद्ध मिलान 5:0/3:0/3:0/3:0.
हामी juct यो अग्लो र बलियो टोली विरुद्ध प्ले गर्ने सही तरिका पत्ता लगाउन सक्दैनन्. राम्रो व्यक्तिहरूलाई छ, तिनीहरूले स्वीडेन मा फ्रान्स अन्तिम राउन्ड पिटाई पछि उच्च उडान गर्दै 2:1, हामी साँच्चै नेताहरू गर्न गुमाउने पछि नजिक हुन सुनको मौका छुटेका पछि हाम्रो विश्वास घाँस रूपमा कम छ 2:1 बेलारुस मा।. स्विडिश जीत यहाँ प्रत्याभूति देखिन्छ र म तिनीहरू मिल पक्कै पनि लिन तरिका छ. 0:1 वा 0:3 अन्तिम स्कोर लागि मेरो भविष्यवाणी यहाँ.
Trelleborg बनाम हेलसिंगबर्ग